Vaovao - Ahoana no hisafidianana fikolokoloana eo aloha na any aoriana ho an'ny fampisehoana narahinao.
Ahoana ny fomba hisafidianana fikolokoloana eo aloha na any aoriana ho an'ny fampisehoana narahinao.
Ny fomba fikojakojana ny fampiratiana led dia mizara ho fikojakojana eo aloha sy fikolokoloana ambadika.
Fikojakojana lamina taloha ho an'ny efijery LED an'ny rindrina ivelany ivelany, tsy maintsy noforonina amin'ny sisiny aoriana izy mba hahafahan'ny olona manao fikojakojana sy fanamboarana avy ao ambadiky ny vatan'ny efijery.
Hamarino tsara fa tsara ny porofo amin'ny rano amin'ny tontolo ivelany, ny fisehosehoana any aoriana dia mila fonosana profil aluminium koa mba hahazoana antoka fa tsy misy rano milentika ao anaty seho namboarina, izay haavon'ny tokony ho hatramin'ny IP65.
Ny fepetra ara-teknika ankapobeny dia avo, fametrahana sy fanesorana dia manahirana ary mandany fotoana.
Ary koa, ho an'ny fampisehoana tarihina ivelany, YWTLED dia namorona fomba roa hanamafisana ny fampirantiana any ivelany.
Vahaolana iray ho an'ny fikojakojana eo aloha ny fihodinan'ny volo maody amin'ny pixel p3.91, p4.81, p5.33, p6.67, p8, p10, p16, izay ny ambaratonga porofo ety ivelany dia mifanandrify amin'ny IP65.
Ny fikojakojana faharoa dia vahaolana ivelany misokatra fampirantiana kabinetra.
Kabinetra varavarana misokatra eo anoloana miaraka amin'ny tehina hydraulic nitaingina ireo singa fampiratiana rehetra.
Miaraka amin'ny fikojakojana eo alohan'izay, ny efijery namboarina dia azo namboarina manify sy maivana, ampifandraisina amin'ny tontolo manodidina, hahatratra ny bika aman'endrika.
Ho an'ny toerana an-trano sasany indrindra amin'ny toerana malalaka, na ny fametrahana rindrina, mazava ho azy fa tsy safidy tsara amin'ny fikolokoloana any aoriana izany.
Miaraka amin'ny haitao Narrow Pixel Pitch LED Display novolavolaina, ny fampisehoana LED anaty trano fikojakojana an-tsokosoko dia nanjaka tsikelikely.
Izy io dia namboarina miaraka amin'ny andriamby mba hanamboarana ny modely amin'ny kabinetra na ny firafitry ny vy. Sokafy ny kabinetra na ny modules iray manontolo avy eo anoloana, rehefa ravana, i Sucker dia manohina mivantana ny faritra misy ny Module ho an'ny fikojakojana eo aloha,
Raha ampitahaina amin'ny fikojakojana lamosina, ny tombony amin'ny efijery LED aloha-fikojakojana dia ny hamonjy habaka sy ny rafitra fanohanana, hampitombo ny fampiasana ny habaka ary hampihena ny fahasahiranana aorian'ny asa fivarotana.
Ny fomba fikojakojana eo alohan'izay dia tsy mila lalantsara, manohana ny fikolokoloana tsy miankina eo anoloana, ary mamonjy toerana eo amin'ny efijery aoriana.
Tsy mila manala tariby, manohana ny asa fikojakojana haingana, mampitaha ny fikojakojana any aoriana, izay mila manala visy marobe aloha handravana ny fikojakojana aloha indrindra ary mora kokoa. Na izany aza, noho ny habaka voafetra ao amin'ny efitrano, ny rafitra dia mitaky fepetra lehibe amin'ny fiparitahan'ny hafanana amin'ny kabinetra, raha tsy izany dia mora kokoa amin'ny tsy fahombiazan'ny efijery.
Amin'ny lafiny iray, ny fikojakojana lamosina dia manana tombony manokana.
Ny vidiny ambany, ny famafana ny hafanana tsara, izay mety kokoa amin'ny tampon-trano, ny tsanganana ary ny tranga hafa, ary manana fahombiazana amin'ny fizahana sy fikojakojana.
Noho ny fampiharana samihafa dia azonao atao ny misafidy ireo fomba fikojakojana roa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.